Imephu yefowuni ephathekayo-iGeofumadas
Imephu yefowuni ephathekayo
NgoJanuwari, 2010 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Ngoku i-Amazon Kindle yenziwe yafumaneka kumazwe angaphezu kwe-100 ngokusebenzisa i-EDGE / GPRS okanye i-3G inethiwekhi, kuya kuba ngumdla ukwazi ukubekwa kwezi zinto emhlabeni.
Ukwenza oku, iAmazon ibhekisa kuyo le mephuNdingaphantse ndifunga ukuba iyakhonzwa Vula iiLala.
Apho banayo iYurophu, ilungelo elinokwenzeka, ngelixa kwiMpuma Ekude neIndiya imele ukogquma, iJapan, iKorea neThailand nge3G, apho bengafuni ukuba u-Obama abonakale ngathi akukho nto okanye unxibelelwano alunoluhlobo oluvulekileyo.
Imephu elandelayo ibonisa iMelika, ine-3G yokugubungela iidolophu ezinkulu zedolophu.
Ityala lendawo yeCaribbean lisafuna ukwazi, iCosta Rica nayo telephony Ibonisa oko kuthethwa ngabantu abaninzi, baqhubele phambili kwizinto ezininzi kodwa umnxeba ophathwayo uhamba nentlekele (njengaseCuba?). Emva koko iPuerto Rico yahlukile.
EMzantsi Melika ungayibona indlela yommandla osemazantsi eBrazil, Uruguay kunye nasemaNtla mpuma eArgentina.
Ukuba oku kulinganise ukukhula okanye ukufikelela kuxhulumaniso kuya kuba yinto engathandabuzekiyo esikubonayo ngeParaguay, iPeru neColombia.
Kodwa ke, siza kubona ukuba ngaba uhlobo luyathandwa phakathi kwe-Hispanics, ngoku kukho ingxelo engabizi kakhulu, enokufunda i-pdf kunye neebhloko nge-rss ngaphandle kokuhlawulela olo fikelelo. Kuhleli ukuba kubonwe ukuba izibonelelo ziyayaphula imiqobo enjengokufumaneka okuqulathiweyo komxholo ngeSpanish, umgangatho womfundi ngokuvakalayo kunye ne-aksenti engaqhelekanga kunye nomkhwa omncinci wokufunda.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IGeofumadas: nantsi phakathi kwethu
Post Next Iholide kwiifoto ezili-10Okulandelayo »
Phendula "Imephu yefowuni ephathekayo"
Ulungile, kuphela bayikhonza kwiframe equlathe http://client0.cellmaps.com/na.html , elayisha i-PROJ4
kwaye uyiqwalasele kunye http://client0.cellmaps.com/js/amazon_viewer.js